आखिर कस्ले बनायो एमसीसी अनुमोदनको ड्राफ्ट ? अध्यक्ष प्रचण्डले खोले रहस्य ( भिडियो सहित ) « Niatra TV
आखिर कस्ले बनायो एमसीसी अनुमोदनको ड्राफ्ट ? अध्यक्ष प्रचण्डले खोले रहस्य ( भिडियो सहित )
काठमाण्डौं,फागुन १६ । नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आईतबार अनुमोदन भएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी ) देश र जनताको हितमा रहेको प्रस्ट पार्नु भएको छ । सोमबार आफ्नै निवास खुमलटारमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा वहाँले उक्त कुरा भन्नु भएको हो ।
व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भयो । देश ठुलो दुर्घटनाबाट बच्यो,संविधान बच्यो एमसीसी पास भएकोमा खुसी छु । भन्नु भयो । संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात हुन्छ कि भन्ने लागेर अन्य दलहरु सँग सहमति जुटाउने उपाय खोजेको, तर आफूलाई नै भिलेनका रुपमा प्रस्तुत गरेको उनको गुनासो राख्नु भयो ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा नेपाल पनि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल भएको प्रचार भएपछि एमसीसी विवादमा परेको प्रचण्डले बताउनु भयो ।
त्यस्तै एमसीसी बिरुद्ध मतभेदका बिषयमा देव गुरुङको अहिले सम्म कुनै प्रतिकृया नआएको स्पस्ट पार्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रती लक्षित गर्दै भन्नु भयो महाकाली सन्धीपछी एमाले नेता बामदेव गौतमले जस्तो बाटो रोजे आफूले रोक्न नसक्ने समेत उनले बताए । नेता श्रेष्ठ असन्तुस्टी सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘यो भनेपछि भएभरका कार्यकर्ता मतिर केन्द्रित हुन्छन् भन्ने ठान्नुभयो होला । जनता सबै म तिर आउँछन् भन्ने ठान्नुभयो होला ।’
यदि एमसीसीको विरोध गर्दा भोट आउने भए सबै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल तिर लाग्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘त्यस्तो हुँदैन ।’ भन्नु भयो ।